Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabawe Robert Mugabe oo geeriyooday | HalQaran.com
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabawe Robert Mugabe oo geeriyooday
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe, Robert Mugabe oo geeriyooday
Zimbabwe (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabawe Robert Mugabe ayaa geeriyooday, kadib xanuun muddo badan haayay, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa oo la hadlay qaar ka mid ah Warbaahinta Caalamka.
Robert Mugabe ayaa in ka badan 30 Sanno Madaxweyne ka ahaa dalka Zimbabawe, waxaana xilka looga qaaday afgembi militari bishii November ee sannadkii 2017-kii, taasoo soo afjartay xukunkiisii socday in ka badan 30 sano.
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe da’diisa waxay aheyd 95 sano jir, Wuxuu dhashay 21-kii February 1924, xilligaas oo Zimbabawe loo garanayay Rhodesia, waxaana uu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano ka dib markii uu eedeeyay dowladdii Gumeystaha ee Rhodesia, sannadkii 1964-tii.
Mr. Mugabe ayaa sannadkii 1973-dii isagoo xabsi ku jira loo doortay madaxweynaha xisbiga Zanu ee Zimbabawe, kaasoo uu ka mid ahaa aasaasayaashiisa.
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabawe